कस्तो रोग हो मस्तिष्कघात ? | Ratopati
टाउको नचिरी यसरी गरिन्छ शल्यक्रिया (भिडियो वार्ता)
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ४, २०७७ chat_bubble_outline0
मानिसलाई सताउने विभिन्न रोगमध्ये मस्तिष्कघात अर्थात ब्रेन स्ट्रोक पनि एउटा समस्या हो । विश्वमा हरेक वर्ष यो रोगले धेरै मानिसलाई सताइरहेको हुन्छ । हामीले यो कस्तो रोग हो, यसका लक्षण केके हुन्, उपचार कसरी हुन्छ र यसबाट जोगिन केके कुरामा सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा डाक्टर सुवास फुँयालसँग कुराकानी गरेका छौँ । डा. फुँयाल न्युरो इन्टरभेन्सनिस्ट हुनुहुन्छ । उहाँले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सबाट न्युरो इन्टरभेन्सनका बारेमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानी :
मस्तिष्कघात कस्तो स्वास्थ्य समस्या हो ?
मस्तिष्कघातलाई ब्रेन अट्याक पनि भनिन्छ । हामीले सुनिरहेको अर्को समस्या हृदयाघात हो, मुटुको नसा बन्द भएर आउने समस्यालाई हामी हर्ट अट्याक भन्छौँ । त्यस्तै दिमागको सानो वा ठूलो नसा बन्द भयो भने जुन लक्षण आउँछ त्यसलाई हामी मस्तिष्कघात भन्छौँ । यो एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन पनि हो, यसलाई मेडिकल इमर्जेन्सी पनि भनिन्छ ।
यसका लक्षणहरु कस्ता हुन्छन् ?
मस्तिष्कको सानो वा ठूलो नसा बन्द भएपछि बिरामीमा आउने लक्षणहरुलाई हामीले ‘बी फास्टे‘ भन्ने गर्छौँ । यसमा बि भनेको ब्यालेन्स हो । यदी बिरामीमा एक्कासि ब्यालेन्स बिग्रियो, उभिँदाखेरी उभिन सकेन लर्बरियो भने मस्तिष्कघातको लक्षणको रूपमा बुझिन्छ । अर्को ई भएको आई अर्थात आँखा । एउटा वा दुइटै आँखाले एक्कासि रूपमा देख्न नसक्नु वा आँखाले हेर्दा धमिलो देखिनु । एक्कासि यस्तो भयो भने यो पनि मस्तिष्कघातको लक्षण हो ।
यस्तै एफ भनेको फेस । फेसियल डिभेसन । जस्तो हाँस्दाखेरी मुख एकातिर बाङ्गो हुनु पनि मस्तिष्कघातको अर्को लक्षण हो । अर्को, ए भनेको आर्म हो । हात र खुट्टामा कमजोरी हुनु, नचल्नु, प्यारालाइसिस् हुनु । दुवै हात सीधा पार्दा एउटा हात तल खस्कनु । एक्कासि यस्तो भयो भने यो पनि मस्तिष्कघातको एउटा लक्षण हो । यस्तै एस भनेको स्पिच । बोलीमा लर्बराहट आउनु, एक्कासि रूपमा बोल्न नसक्नु, यो पनि एउटा मस्तिष्कघातको लक्षण हो । अर्को टी भनेको टाइम अर्थात समय हो । समय किन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने मस्तिष्कघात हुँदा बिरामीलाई दुख्दैन किनभने दिमागमा दुःखाई ग्रहण हुँदैन । त्यही भएर एक्कासि रूपमा यी कुनै पनि लक्षणहरु आउँदा उहाँहरु तुरुन्त अस्पताल जानुहुन्न । हृद्यघात हुँदा मुटु दुख्छ तुरुन्त अस्पताल आउनुहुन्छ । तर मस्तिष्कघात हुँदा दिमागको कुनै पनि मोटो नसा बन्द हुँदा तुरुन्त अस्पताल आउनुभयो भने अरू भागको नसा मर्न पाउँदैन । ६ घण्टा या २४ घण्टा भित्रमा आउनुभयो भने हामीले न्युरो इन्टरभेन्सन प्रविधिबाट खुट्टाको नसाबाट तार पठाएर जहाँ बन्द नसा छ त्यसलाई खोलेर बिरामीलाई पहिलाको जस्तै हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने बनाउन सक्छौँ । यसमा टी अर्थात टाइम, समयको किन धेरै महत्त्व छ भने बिरामीलाई समयमै तुरुन्तै अस्पताल लिएर जानुप-यो ।
यो पद्धतिबाट उपचार गर्नका लागि हामीलाई विशेष खालको एउटा क्याथल्याब चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले क्थाल्याब भयो भने बिरामी र अप्रेसन गर्ने सुरक्षित हुने भनेको छ । क्याथल्याबमा लगेर हामी अप्रेसन गर्छौ र एक्सरेको माध्यमबाट समस्या भएको भागमा एकै पटक सबैतिरबाट हेर्न सक्छौँ । बिरामीको टाउकोको अगाडि, पछाडि, साइडमा एकै पटकमा हेर्न सक्छौँ र तत्कालको समयमा कहाँनिर के समस्या छ, हेर्दै त्यसको अप्रेसन गर्न सकिन्छ ।
न्युरो इन्टरभेन्सन पूर्ण रूपमा नेपालमा गर्न थालेको एक डेढ वर्ष भएको छ । त्यसभन्दा अगाडि पनि हुने गरेको थियो तर पूर्ण अवस्थामा गर्न थालेको धेरै भएको छैन ।
यो पद्धति सन् १९९७ देखि सुरु भएको हो, विदेशमा यो प्रकारको पद्धतिबाट उपचार हुँदै आएको छ । भारतमा पनि धेरै वर्षअगाडिदेखि यो पद्धतिबाट उपचार भइरहेको छ । नेपालमा चाहिँ भर्खर भित्रिएको हो ।
यो उपचार पद्धति कतिको महँगो छ ?
मस्तिष्कघात भएर ठूलो नसा बन्द भएको छ भने सर्जरी गरेर टाउको चिरेर पनि त्यसको उपचार हुँदैन । एउटा तरिका हो रगत पगाल्ने औषधि दिने । त्यसरी पनि भएन भने खुट्टाको नसाबाट गएर दिमागको मोटो नसालाई खोल्ने त्यसलाई हामी न्युरो इन्टरभेन्सन भन्छौँ । यो पद्धतिबाहेक हामीसँग अरू कुनै उपाय छैन । यस्तै दिमागको नसा फुटेर ब्रेन ह्मरेज भयो भने यसलाई दुई तरिकाबाट अप्रेसन गर्न मिल्छ । एउटा जुन ठाउँमा फुटेको हो टाउको खोलेर त्यसलाई सिलाउने काम हुन्छ भने अर्को टाउको नखोलीकन खुट्टाको नसाबाट गएर जहाँ जुन ठाउँमा नसा फुटेको छ भित्रैबाट त्यसलाई सिलाउन सकिन्छ ।
यसको राम्रो पक्ष भनेको बिरामीको टाउको चिर्नु परेन । यसकारण दिमागमा ठूलो घाउ हुने भएन । अर्को कुरा यो अप्रेसन गर्दा कम समयको बेहोस बनाए पुग्छ । कम समय बेहोस बनाउँदा अन्य रोगहरु लागेका बिरामी, कडा खालका रोग लागेका बिरामीले पनि खप्न सक्ने हुन्छ । खुट्टामा सानो ३ एमएमको घाउ बनाएर अप्रेसन गरिने भएकाले बिरामीलाई कम आईसीयूमा राख्छौँ र वार्डमा सार्छौं । सामान्यतया अप्रेसनपछि चार वा पाँच दिनमा बिरामीलाई घर पठाउने गर्छौं ।
नेपालमा र भारतमा यो पद्धतिबाट गर्ने अप्रेसनका लागि चाहिने तार अमेरिका, युरोपबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले अलि खर्चिलो हुन्छ । नेपालमा भर्खर मात्र सुरु भएकाले सरकारले त्यस्ता समान ल्याउँदा सरकारले केही राहत दियो भने आगाामी दिनमा उपचारमा लाग्ने लागतमा कम गर्न सक्ने थियौँ । बाहिर सामान बन्ने भएका कारण महँगो पर्छ । यो पद्धतिबाट बिरामीको उपचार गर्दा दुई तीन लाखदेखि ५ लाखसम्मको खर्च लाग्छ । केश हेरीकन कति सामान लाग्छ त्यही अनुसार खर्च हुने गरेको छ । खर्च बढी भए पनि यसको फाइदा भनेको कम समय बिरामीलाई अस्पताल राख्नुपर्ने, टाउको खोल्न नपर्ने, ठूलो घाउ बनाउन नपर्ने, चाँडोभन्दा चाँडो घर पठाउन सक्ने यसका फाइदाहरु हुन् ।
यसरी उपचार गर्दा सफलता दर कस्तो पाउनुभएको छ ?
यो प्रविधिबाट उपचार गर्दा किताबमा हामी ८५ देखि ९० प्रतिशत सफलता दर हुन्छ भनेर पढ्छौँ । यसको जटिलता दर कम छ । मैले पनि नेपालमा १ सय ५० जनाभन्दा बढीको उपचार गरिसकेको छु । दिमागको नसा बन्द भएको, दिमागको नसा गुजुल्टो परेको, नसा च्यातिएर रगत बगेको, दिमागको नसा च्यातिएर ब्रेन ह्यामरेज भएको मात्र ४० भन्दा बढी केसको उपचार गरेको छु । तीमध्ये एकजना बिरामीमा जटिल अवस्था भएर मृत्य भएको थियो । तीबाहेक अन्य बिरामीको उपचार सफल भएको छ, उहाँहरु फलोअपमा पनि आउने गर्नुहुन्छ ।
मस्तिष्कघात हुन नदिन के गर्ने ? केके छन् सावधानीका उपाय ?
मस्तिष्कघात हुन नदिन सबैभन्दा पहिला जो बिरामी हाइपर टेन्सनको रोगी हुनुहुन्छ, मधुमेह भएको छ, उहाँहरुले नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्छ । दोस्रो जो बिरामीलाई मुटुको समस्या छ, उहाँहरुले नियमित रूपमा मुटुको डाक्टरलाई देखाउने र औषधि खान छुटाउनु भएन । नियमति रूपमा व्यायामहरु गर्ने, बिहान बेलुका नियमित रूपमा हिँडडुल गर्ने, शारीरिक कसरतहरु गरियो भने शरीरमा भएको चिल्लो पदार्थहरु कम हुने गर्छ ।
त्योबाहेक हामीले खानामा एकदमै ध्यान पु-याउनुपर्ने हुन्छ । चिल्लो कुरा सकेसम्म कम खानुप-यो । गुलियो कुरा सकेसम्म कम खानुप-यो । जाँड, रक्सी, चुरोटको सेवन कम गर्नुप-यो वा गर्दै गर्नुभएन । जीवनशैली सुधार्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यी कुराहरुको पालना गरेमा मस्तिष्कघातबाट बच्न सक्छौँ ।